xXx (2002) and (2005) - မြန်မာစာတန်းထိုး - Channel Myanmar Update
XXX ဆိုလို့ 18+ မထင်လိုက်ပါနဲ့ . 2002ခုနှစ်မှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Vin Diesel ရဲ့အက်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ 2002 မှာ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး 2005မှာ နောက်ထပ် xXx 2005 ထပ်ထွက်ခဲ့ပြီး ထပ်မံနာမည်ကြီးခဲ့ရပြန်ပါတယ်၊ ခုလည်း 12နှစ်ကြာခဲ့ပြီး လာမယ့် 2017မှာ ဒီကားကထပ်မံထွက်ဦးမှာပါ ၊ အဲ့တော့ 2017 မှာ ထွက်ရင်ဇာတ်ရည် လည်လည်ကြည့်ရအောင် အရင်ကမကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ပရိသက်များ အတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်၊
ဇာတ်လမ်းအညွှန်းအနေနဲ့ အပိုင်း(၁) ကိုအနည်းငယ်လောက် ပြောပြချင်ပါတယ်
X လို့ စတန့်လောကမှာ နာမည်တွင်နေတဲ့ X(vin diesel)ဟာ အစိုးရအရာရှိတစ်ဦးရဲ့ ကားကိုခိုးယူပြီး တံတားပေါ်ကနေခုန်ချပြခဲ့တာကြောင့် ရဲတွေရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းယူခြင်းခံရပါတယ်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အစိုးရအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးနှိမ်နှင်းရေး အဖွဲ့ဟာလည်း မှောင်ခိုးသမားတွေကိုဖမ်းယူဖို့ကြိုးစားတိုင်း
သူတို့ရဲ့ အေးဂျင့်တွေသာ အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ကြောင့် အကြံအစီတစ်ခုအဖြစ် ဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေထဲကမှ ထူးချွန်သူများကိုပြန်လည်ရွေးချယ်ပြီး အခွင့်ရေးတစ်ချို့နဲ့ အလဲအလှယ်လုပ်ကာ မှောင်ခိုသမားတွေကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးစေပါတယ်၊ ကဲ . . . ဇာတ်လမ်းလေးဒေါင်းပြီးသာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါကုန်။
(ဒီဇာတ်လမ်း Part 1 and2နှစ်ခုလုံးကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ cm teamမှ Wai Yan M ဖြစ်ပါတယ်။)
Download And Watch From Pcloud Part 1(720P – 800Mb)
Download And Watch Direct (720P - 800MB)
Download And Watch From Pcloud Part 1 (Small file size – 400Mb)
Download And Watch Direct (Small file size - 400MB)
xXx (2005) ကိုပါ တစ်ဆက်တည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ၊
Download And Watch From Pcloud Part 2(720P – 800Mb)
Download And Watch Direct Part2(720P - 800MB)
Download And Watch From Pcloud Part2(Small file size)
Download And Watch Direct Part2(Small file size)
18 February 2018 at 00:46
18 February 2018 at 00:47